ဘလိဇ်နိုင်ငံ - ဝီကီပီးဒီးယား
ကိုဩဒိနိတ်: 17°4′N 88°42′W﻿ / ﻿17.067°N 88.700°W﻿ / 17.067; -88.700
ဆောင်ပုဒ်: "Sub Umbra Floreo" (လက်တင်)
နိုင်ငံတော် သီချင်း: "Land of the Free"
ဘလိဇ်နိုင်ငံ၏ တည်နေရာ (အစိမ်းရင်း)
Mayan languages (Q'eqchi' language, Mopan language, Yucatec Maya language)
ဂျာမန် (Plautdietsch language, Standard German, Pennsylvania German language)
၁၀.၁% အခြား (ဘဟာအီ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဟိန္ဒူဘာသာ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာ၊ ဂျူးဘာသာများ ပါဝင်)
၁၉၆၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ
၁၉၈၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်
၂၂,၉၆၆ km2 (၈,၈၆၇ sq mi) (အဆင့်: ၁၄၇)
၄၁၉,၁၉၉ (အဆင့် - ၁၇၆)
၁၇.၇၉/km2 (၄၆.၁/sq mi) (အဆင့် - ၁၆၉)
မြင့် · ၁၁၀
ဘလိဇ် ဒေါ်လာ (BZD)
CST (GMT-6) (UTC-6)
↑ Belize Population and Housing Census 2010: Country Report။ Statistical Institute of Belize (2013)။ 13 November 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 July 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Belize, Geography, The World Factbook။ CIA (14 August 2019)။
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named censusarea
↑ Population and Population Density 2010, Postcensal estimates။ Statistical Institute of Belize။
↑ Belize Population and Housing Census 2010: Country Report။ Statistical Institute of Belize (2013)။ 27 January 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 July 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၆.၀ ၆.၁ ၆.၂ ၆.၃ Belize။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့။
↑ "Income Gini coefficient"၊ ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးမှု အစီအစဉ်။ 15 July 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 10 June 2010။
↑ Human Development Report 2020 The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene (PDF)။ ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးမှု အစီအစဉ်။ 15 December 2020။ pp. 343–346။ ISBN 978-92-1-126442-5။ ၁၅ ဇူလိုင် ၂၀၂၁ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Belize (11 March 1947)။ Definition of Time Act။ Unusually, the legislation states that standard time is six hours later than Greenwich mean time.
↑ Infolink Production Center (2007-04-01)။ Statistical Institute of Belize။ Statisticsbelize.org.bz။ 2010-08-29 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ World Population Prospects: The 2008 Revision Population Database။ Esa.un.org (2009-03-11)။ 19 August 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2010-08-29 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဘလိဇ်နိုင်ငံ&oldid=725864" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၉:၂၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။